Home Wararka Maxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada Jubbaland?.
Madaxweynaha Jubbaland Ahmed Mohamed Islaam, ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada isagoo golaha warbixin guud ka siiyey xaaladda Amniga, abaaraha ka jira deegaanada Jubaland, iyo booqashadii ay shalay Kismaayo ku timid safiirka UK ee Soomaaliya.
Warbixinta amniga ayaa ugu horeeyntii golaha looga hadlay, waxaana la bogaadiyey ciidamada qaybahooda kale duwan kuwaa oo kujira la dagaalanka Al-shabaab iyo adkeeynta amaanka guud.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in Jubbaland ay wado gurmadyo kale duwan oo ku saabsan sidii gurmad xooggan loogu fidin lahaa dadka ay abaaruhu ku dhaceen, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu sheegay Madaxweynaha in ay kala hadleen sidii ay qayb weyn oga qaadan lahaayeen gurmadka loo sameenayo dadka ay abaartu saameysay.
Previous articleDoorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo ka dhacday Dhuusamareeb
Next article[XOG] Villa Somalia oo isku maandhaafsan qofkii bedeli lahaa Farmaajo (Kheyre ama Qoor Qoor)
Qarax goor dhaw ka dhacay magalaada Muqdisho